Testicular Cancer - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အမြိုးသားတို့အတှကျ အိပျမကျဆိုး ( သို့မဟုတျ ) ဝှေးစကေ့ငျဆာ
ဝှေးစကေ့ငျဆာ ဆိုသညျမှာ အမြိုးသားမြား၏ ကပျပယျအိတျအတှငျးရှိ ဝှေးစေ့ တဈလုံး သို့မဟုတျ နှဈလုံး လုံးတှငျ ကငျဆာဖွဈခွငျးကို ဆိုလိုပါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ အသကျ ၂၀ ကနေ ၃၅ အတှငျးရှိ အမြိုးသားမြားတှငျ ဖွဈပှားနိုငျပါတယျ ။
တိတိပပ အနနေဲ့ မရှိသောလညျး မှေးရာပါ မူမမှနျအခွအေနမြေား ( ဥပမာ ဝှေးစသေ့ညျ ကပ်ပယျအိတျအတှငျးမဆငျးဘဲ ဗိုကျအတှငျးရှိနခွေငျး ) ၊ မြိုးရိုးထဲတှငျ ဝှေးစကေ့ငျဆာဖွဈဖူးခွငျး ၊ လူဖွူဖွဈခွငျး အစရှိသညျ့ အခကျြမြားက ဝှေးစကေ့ငျဆာ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ ။
ဘယျလို သိရှိနိုငျမလဲ ?
ပုံမှနျအားဖွငျ့ ဝှေးစကွေီ့းနတော အလုံးအကွိတျသေးသေးလေး စမျးမိတာ မာတောငျတောငျလေး ဖွဈနတောမြိုးကနေ သိရှိကွပါတယျ ။ သို့သျော ဝှေးစကေ့ငျဆာ ဖွဈသူတိုငျး ထိုကဲ့သို့လက်ခဏာမြား တှရှေိ့မညျ မဟုတျသကဲ့သို့ ထိုလက်ခဏာမြားရှိတိုငျးလညျး ဝှေးစကေ့ငျဆာဟု ရောဂါတနျးတပျ၍ မရပါ ။ တဈခါတဈရံ တခွားနရောမြားသို့ပါ ကငျဆာ ပြံ့နှံ့ပွီးမှ လက်ခဏာပျေါလာလရှေိ့သညျ ။
* မနာကငျြသော အလုံး အကွိတျ သို့မဟုတျ ဥယောငျနခွေငျးမြိုး အစောပိုငျးတှငျ ပဲစခေ့နျ့ ဖနျဂျေါလီလုံးခနျ့ အရှယျအစားရှိနိုငျပွီး အခြိနျနှငျ့အမြှ ကွီးလာနိုငျပါတယျ ။
* ဝှေးစေ့ သို့မဟုတျ ကပ်ပယျအိတျ တဈခုလုံး နာကကျြ ကိုကျခဲနခွေငျး အနရေခကျခွငျး
* ဝှေးစကေို့ စမျးကွညျ့သောအခါ ယခငျနှငျ့ မတူဟု ခံစားရခွငျး လေးပငျနသေညျဟု ခံစားရခွငျး ဥပမာအားဖွငျ့ ဝှေးတဈေလုံးသညျ နောကျတဈလုံးထကျ မာနခွေငျး ၊ ပိုသေးသှား ကွီးသှားသညျဟု ထငျရခွငျး
* ဗိုကျအောကျပိုငျးနှငျ့တငျပဆုံတဝိုကျ ကိုကျခဲနခွေငျး
* ကပ်ပအိတျထဲ အရညျမြား ရုတျတရကျ ပွညျ့လာခွငျး
* အခြိနျကွာလာသညျနှငျ့ အမြှ ကငျဆာပြံ့နှံ့သညျ့ လက်ခဏာမြားဖွဈသော ခါးနာခွငျး ၊ မောခွငျး ၊ ရငျဘတျအောငျ့ခွငျး ၊ ခြောငျးဆိုးသှေးပါဖွဈလာခွငျး
ဘယျလို သိရှိမလဲ ?
ဝှေးစကေ့ငျဆာ ဟုတျမဟုတျ သခြောရနျအတှကျ တဈကိုယျလုံးစမျးသပျစဈဆေးခွငျး ရောဂါရာဇဝငျ မေးမွနျးခွငျး ၊ ultrasounds ရိုကျခွငျး ၊ သှေးထဲတှငျ ကငျဆာပစ်စညျးရှိမရှိစဈဆေးခွငျးတို့ဖွငျ့ စဈဆေးနိုငျပါတယျ ။ ထို့အပွငျ တခွားနရောမြားသို့ပြံ့နှံမှုရှိမရှိ သိရှိရနျလဲ လိုအပျသော စဈဆေးမှုမြား ထပျမံလိုအပျပါတယျ ။
ကုသရေးအနဖွေငျ့ ဓာတျရောငျခွညျဖွငျ့ ကုသခွငျး ၊ ကငျတာဆေးသှငျး ကုသဖွငျး ၊ ခှဲစိတျကုသခွငျး ၊ ကငျဆာကွောငျ့ ဖွဈသော နောကျဆကျတှဲ လက်ခဏာမြား သကျသာစရေနျ ကုသပေးခွငျး အစရှိသညျတို့ကို ရောဂါအဆငျ့လိုကျ ကုသနိုငျပါတယျ ။
ရောဂါ အဆငျ့အလိုကျ ၊ ကငျဆာအမြိုးအစားအလိုကျ ၊ အကွိတျ အရှယျအစားအလိုကျ ပွနျလညျကောငျးမှနျမှုဟာ ကှာခွားနိုငျပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့လဲ အမြိုးသားမြား အနဖွေငျ့ ဝှေးစနှေ့ငျ့ပတျသတျလြှငျ ပေါ့ဆစှာ မနသေငျ့ပဲ အမွနျဆုံး ပွသရနျ လိုအပျပါကွောငျး တိုကျတှနျး လိုကျရပါတယျ ။
အမျိုးသားတို့အတွက် အိပ်မက်ဆိုး ( သို့မဟုတ် ) ဝှေးစေ့ကင်ဆာ
ဝှေးစေ့ကင်ဆာ ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားများ၏ ကပ်ပယ်အိတ်အတွင်းရှိ ဝှေးစေ့ တစ်လုံး သို့မဟုတ် နှစ်လုံး လုံးတွင် ကင်ဆာဖြစ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အသက် ၂၀ ကနေ ၃၅ အတွင်းရှိ အမျိုးသားများတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ် ။
တိတိပပ အနေနဲ့ မရှိသောလည်း မွေးရာပါ မူမမှန်အခြေအနေများ ( ဥပမာ ဝှေးစေ့သည် ကပ္ပယ်အိတ်အတွင်းမဆင်းဘဲ ဗိုက်အတွင်းရှိနေခြင်း ) ၊ မျိုးရိုးထဲတွင် ဝှေးစေ့ကင်ဆာဖြစ်ဖူးခြင်း ၊ လူဖြူဖြစ်ခြင်း အစရှိသည့် အချက်များက ဝှေးစေ့ကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။
ဘယ်လို သိရှိနိုင်မလဲ ?
ပုံမှန်အားဖြင့် ဝှေးစေ့ကြီးနေတာ အလုံးအကြိတ်သေးသေးလေး စမ်းမိတာ မာတောင်တောင်လေး ဖြစ်နေတာမျိုးကနေ သိရှိကြပါတယ် ။ သို့သော် ဝှေးစေ့ကင်ဆာ ဖြစ်သူတိုင်း ထိုကဲ့သို့လက္ခဏာများ တွေ့ရှိမည် မဟုတ်သကဲ့သို့ ထိုလက္ခဏာများရှိတိုင်းလည်း ဝှေးစေ့ကင်ဆာဟု ရောဂါတန်းတပ်၍ မရပါ ။ တစ်ခါတစ်ရံ တခြားနေရာများသို့ပါ ကင်ဆာ ပျံ့နှံ့ပြီးမှ လက္ခဏာပေါ်လာလေ့ရှိသည် ။
* မနာကျင်သော အလုံး အကြိတ် သို့မဟုတ် ဥယောင်နေခြင်းမျိုး အစောပိုင်းတွင် ပဲစေ့ခန့် ဖန်ဂေါ်လီလုံးခန့် အရွယ်အစားရှိနိုင်ပြီး အချိန်နှင့်အမျှ ကြီးလာနိုင်ပါတယ် ။
* ဝှေးစေ့ သို့မဟုတ် ကပ္ပယ်အိတ် တစ်ခုလုံး နာကျက် ကိုက်ခဲနေခြင်း အနေရခက်ခြင်း
* ဝှေးစေ့ကို စမ်းကြည့်သောအခါ ယခင်နှင့် မတူဟု ခံစားရခြင်း လေးပင်နေသည်ဟု ခံစားရခြင်း ဥပမာအားဖြင့် ဝှေးတေစ်လုံးသည် နောက်တစ်လုံးထက် မာနေခြင်း ၊ ပိုသေးသွား ကြီးသွားသည်ဟု ထင်ရခြင်း
* ဗိုက်အောက်ပိုင်းနှင့်တင်ပဆုံတဝိုက် ကိုက်ခဲနေခြင်း
* ကပ္ပအိတ်ထဲ အရည်များ ရုတ်တရက် ပြည့်လာခြင်း
* အချိန်ကြာလာသည်နှင့် အမျှ ကင်ဆာပျံ့နှံ့သည့် လက္ခဏာများဖြစ်သော ခါးနာခြင်း ၊ မောခြင်း ၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း ၊ ချောင်းဆိုးသွေးပါဖြစ်လာခြင်း
ဘယ်လို သိရှိမလဲ ?
ဝှေးစေ့ကင်ဆာ ဟုတ်မဟုတ် သေချာရန်အတွက် တစ်ကိုယ်လုံးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ရောဂါရာဇဝင် မေးမြန်းခြင်း ၊ ultrasounds ရိုက်ခြင်း ၊ သွေးထဲတွင် ကင်ဆာပစ္စည်းရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းတို့ဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် ။ ထို့အပြင် တခြားနေရာများသို့ပျံ့နှံမှုရှိမရှိ သိရှိရန်လဲ လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှုများ ထပ်မံလိုအပ်ပါတယ် ။
ကုသရေးအနေဖြင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသခြင်း ၊ ကင်တာဆေးသွင်း ကုသဖြင်း ၊ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း ၊ ကင်ဆာကြောင့် ဖြစ်သော နောက်ဆက်တွဲ လက္ခဏာများ သက်သာစေရန် ကုသပေးခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ရောဂါအဆင့်လိုက် ကုသနိုင်ပါတယ် ။
ရောဂါ အဆင့်အလိုက် ၊ ကင်ဆာအမျိုးအစားအလိုက် ၊ အကြိတ် အရွယ်အစားအလိုက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်မှုဟာ ကွာခြားနိုင်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့်လဲ အမျိုးသားများ အနေဖြင့် ဝှေးစေ့နှင့်ပတ်သတ်လျှင် ပေါ့ဆစွာ မနေသင့်ပဲ အမြန်ဆုံး ပြသရန် လိုအပ်ပါကြောင်း တိုက်တွန်း လိုက်ရပါတယ် ။